Uploaded by : zaw min than
Hits - 2349
Uploaded Date : September 11 2010
ည............မှောင်မိုက်လွန်းနေခဲ့..........အနက်ရောင်ဖဲတစ်ချပ်လို...အရာရာ တိတ်ဆိတ်နေကြ........ ခပ်ကွေးကွေး လတစ်စင်းရဲ့..........၀င်ချည်ထွက်ချည်.........သက်ဝင်လှုတ်ရှားမှုအောက်မှာ....ဒီညဟာ.. အပျိုစင်တစ်ယောက်လို......... လှပကျက်သရေရှိနေခဲ့..................ခပ်မဆိတ်..........တိတ်တိတ်လေးနှင့်.............လေတိုးသံတို့၏..ကဗျာရွတ်ဆိုမှုကို....လိုက်လံရွတ်ဆိုနေခဲ့ကြ....လေပြေ တစ်ချို့ ရှက်ပြုံးလေးနှင့်.....ကပို့ကရို့နှင့်........အလှသွေးကြွယ်နေရဲ့.....မျှော်လင့်ချက်...သည်မှန်အိမ်သည်....ကောင်းကင်ယံတွင် ရင်ကွဲအောင်တောက်ပနေရဲ့ .........ကြယ်စင်တွေရဲ့ ...တီးတိုး ပြောဆိုမှုတွေမှာ....ဂရုဏာသံတွေ ...လွှမ်းမိုးနေ..........နှုတ်တော် ဆွံ့အသူလို .....တိတ်တိတ်လေး ...........နှင့် ..........အဝေးကိုပြေး ထွက်ပါရစေ..........နှင်တံကို........မမြောက်လိုက်ပါနှင့် ......ကကြိုးတန်ဆာအစုံအလင်ဖြင့် .........ပွဲ တော်သို့.......သွားခွင့်ပြုပါလေရဲ့..................အဝေးမှ......ဆွဲဆွဲငင်ငင်အူလိုက်တဲ့...ပုစဉ်းရင်ကွဲတစ်ကောင်ရဲ့....အသံဟာ.........တစ်စတစ်စနှင့်..........၀ရုန်းသုန်းကားနိုင် နေခဲ့.. ......အိမ်မက်ရဲ့.........ခြေတော်ရင်းမှာ............မျက်နှာလွှဲပြစ်ထားလိုက်ခဲ့.....အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်နေတဲ့ .........ညမွေး ပန်းရနံ့ကို.... သည်းသည်းခြစ်ခြစ်........နမ်းရှိုက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါ..........သည်မျက်ဝန်းမှာ စိုစွတ်မှုတွေသာ ............တစ်အုံ့တနွေးနှင့်............ည...........တိတ်ဆိတ်မြဲ..........တိတ်ဆိတ်နေဆဲ................ခေါင်းငုံခေါင်းစိုက်နှင့်...သည်လမ်းထက်မှာတော့.......သနပ် ခါးရနံ့ကို ဖက်တွယ်ရင်း........ဘ၀တစ်ခုကို ....ခြစ်ခြစ်တောက် ဆုတ်ဖြဲနေခဲ့......အိမ်မက်တစ္ဆေတွေ ..........လိုက်လံ မနှောက်ယှက်ပါနှင့်..............ဒီနှလုံးသားက..........ဒဏ်ရာတွေကို...............ဆက်ပြီး........မထမ်းပိုးနိုင်တော့လို့ပါ ..........အစိမ်းရောင်တွေ...........အရှေ့မှ.... အနောက်သို့.... .ကူးလူးဆက်ဆံနေခဲ့......... မျက်နှာတစ်ချို့မှာတော့....... အစွယ်ဖွေးဖွေးကို ဖုံးအုပ်တဲ့.........ချိုမြမြအပြုံးတုတစ်ခုကို.......... ချိတ်ဆွဲနေခဲ့ကြ....... မိုးဓားတစ်လက်လို.......... စူးရှထက်မြနေရဲ့........ လာရာလမ်းအတိုင်းသာ..........ပြန်လှည့်ပါတော့မည်........နုတ်ဆက်တေးတော့ ....မဆိုဝံ့တော့ လေရဲ့..... ၀မ်းနည်းမနေနဲ့တော့..........သည်ပွဲတော်ကိုသွားတဲ့........လမ်းဟာ.......သည်တစ်လမ်းတည်းပါ.........နှင်းဆီတစ်ပွင့်ရဲ့. မပီမသ .......ရွတ်ဖတ်သံကို.........ခပ်လေးလေးနှင့်........ရွတ်အံ့နေရဲ့.............အို.................နှင်းဆီတွေ.............နှင်းဆီတွေ..............ကောင်းကင်ရဲ့.......လက်တော်ကြားမှနေ.........ဆင်းသက်လာ လေပြီ.........ရနံ့တို့သည်သာ.......ထစ်ထစ်ချုန်းချုန်းနှင့်............ ။	Send IM - Write Comments | Posted By zaw min than ( 2349 ) Hits
Isabel Marant Poppy Suede Pumps Black Isabel Marant Gava Cotton-Raffia and Leather Pumps
Isabel Marant Poppy Suede Pumps Beige bh8707qa1420121025
စကားလုံးလေးတွေက လှပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့် ဘာသာပြန်ကြည့်တာတော့ ........
Commented by : nyeinnwe | Date : March 14 2011